UDisemba 2019 | RayHaber | raillynews
Izinyanga: December 2019
Izimali Zezokuhamba Komphakathi ZaseBursa Ziyakhuphuka! Intela entsha Esebenzayo Janawari 1
Izindleko Zokuhamba Komphakathi Wezokuvakasha zaseBursa Ziyanda !; Abafundi abakhange bakhishwe kumthethonqubo omusha ngamanani entengo yokuhamba komphakathi eBursa mhlaka 1 Januwari 2020. Ngakho-ke, eminyakeni emi-4 eyedlule, i-TL eyi-1,5 ifaka isicelo ebhodini labafundi [Okuningi ...]
I-Istanbul Metro yathutha Abagibeli abacishe babe izigidi ezingama-700
I-Istanbul Metro yathutha Abagibeli abacishe babe yizigidi ezingama-700; Imetro, ebikhethwa ukuthi ihanjiswe ngokushesha nangokunethezekile, isebenzele izakhamizi zase-Istanbul ngejubane eligcwele ngo-2019. Cishe abagibeli abayizigidi ezingama-700 ngonyaka [Okuningi ...]
I-TÜDEMSAŞ GCC Ukuhlangana Kwenziwe
Umhlangano Webhodi Yezokuphatha weSikhungo wabanjelwa Izisebenzi Zombuso eTÜDEMSAŞ General Directorate futhi izimfuno zaxazululwa. Emhlanganweni owenziwe ngoLwesine, ngoDisemba 2019, 26, izimfuno neziphakamiso zabasebenzi baseTÜDEMSAŞ, Memur-Sen [Okuningi ...]
Umyalezo Wonyaka omusha ovela eTurhan, Ungqongqoshe Wezokuxhumana kanye Nezingqalasizinda
Ugubha unyaka omusha wezwe lethu, isizwe sethu esibaluleke kakhulu nabo bonke abantu. Ngiyafisa ukuthi unyaka ka-2020 ube unyaka lapho amathemba anda, ukuthula kubusa umhlaba wonke, nemizwa yobungani, ubuzalwane nobumbano yathola amandla. Unyaka omusha, [Okuningi ...]
Isisekelo semigqa emibili yoLoliwe ohlukanisiwe ozobekwa eKayseri ngo-2020
IMeya kaMasipala waseKayseri Metropolitan UMemduh Büyükkılıç, 2020 uzoba ngomunye weminyaka yokumaka ikusasa leKayseri, kusho yena. UMongameli Büyükkılıç, Kayseri, hhayi kuphela ngekusasa lanamuhla kubaluleke kakhulu kumaphrojekthi [Okuningi ...]
Umlayezo Wonyaka Omusha weMenenja Jikelele ye-TCDD uYazıcı
Njengomqondisi Jikelele Wezokuhamba we-TCDD, sishiya omunye unyaka lapho sinikela khona ngolwazi olusha noluseqophelweni eliphezulu kwizakhamizi zethu ezihlonishwayo. Ingxenye ebaluleke kakhulu ezakha kakhulu ezweni lanamuhla ikakhulukazi kulomkhakha ujantshi okuyinto bhalisiwe impumelelo enkulu e-Turkey [Okuningi ...]
IMarmaray izosebenza kuze kube yisikhathi sonyaka omusha
Ukuze kuhlangatshezwane nesibalo esandayo sabagibeli ngenxa yoNcibijane woNyaka oMusha, izitimela zaseMarmaray zizosebenza kuphela kuze kube ngu-02.00: 31 ngo-New Year Eve. Izitimela zaseMarmaray zizoqhutshwa phakathi kweziteshi zeZeytinburnu-Söğütlüçeşme ngoDisemba 15, ngezikhathi zemizuzu engu-XNUMX. [Okuningi ...]
Izitholakala eBungalows in Çambaşı Doğa Equipment Ready for the Season
IMeya kaMasipala we-Ordu Metropolitan UMehmet Hilmi Güler wenza utshalomali olubalulekile e-Ordu ukuze ezwe ezokuvakasha unyaka wonke futhi ikakhulukazi ukuvuselela ezokuvakasha zasebusika ngesiqubulo esithi Ordu Ordu hhayi izinyanga ezi-3 kodwa izinyanga eziyi-12 i-Ordu. [Okuningi ...]
I-European Side Metrobus Izikhungo neMephu ye-Metrobus: Ungabona zonke iziteshi zeMetrobus emephini efanayo, okuyi-metrobus esondele kakhulu lapho uya khona kanye nokuma metrobus lapho uya khona. [Okuningi ...]
Zijabulise ngokujabulisa e-Ordu Highlands
IMeya kaMasipala we-Ordu Metropolitan I-Ordu Army yaseMehmet Hilmi Güler hhayi izinyanga eziyi-3 kodwa izinyanga eziyi-12 ”iyafezeka. Ukuze ubone ubusika e-Ordu, kuMasipala weMetropolitan, e-Akkuş [Okuningi ...]
I-ANTRAY ne-City Amabhasi amahhala kuze kube uNcibijane
Ukuhamba kwamahhala ngo-Eva Wonyaka Omusha. Isipho sonyaka omusha esivela kuMeya we-Antalya uMuhittin Böcek kubahlali base-Antalya. Amabhasi asemthethweni okukaMasipala we-Metropolitan ne-ANTRAY azonikeza abantu izisetshenziswa mahhala kuze kube unyaka omusha. [Okuningi ...]
I-Akçaray Expeditions izoqhubeka Kuze kube ngu-02.00: Namuhla ebusuku
EzokuThutha, okuxhaswe ngazo kuMasipala waseKocaeli Metropolitan, umemezele ukuthi u-Akçaray uzosebenza kuze kube u-02.00: 1 ngo-New Year Eve. I-Akçaray'ın ngosuku lokuqala lonyaka ngoJanuwari 2020, 02.00 ngo-30 am njalo ngemizuzu engama-XNUMX kuze kube sebusuku [Okuningi ...]
IMeya yase-İzmir uTunç Soyer uqale usuku lokugcina lonyaka ngokuhamba komphakathi. USoyer wanikeza abagibeli besikebhe isikebhe sezimbali nezikotshana eziyizigidi eziyi-18. Izmir [Okuningi ...]
U-2019 kwaba unyaka wokutshala imali kwe-İzmir
UMasipala wase-İzmir Metropolitan watyala imali eyi-2019 billion TL ngonyaka we-3,3. Amaphesenti angama-41 ayo yonke imali esetshenzisiwe ekutshaleni imali kwiMetropolitan yokutshala imali inyuke ngamaphesenti ayi-16 uma kuqhathaniswa nonyaka owedlule. Izmir Metropolitan Municipality, [Okuningi ...]